How to Write Professional Email Subject Line
Khant Zaw HeinFormer Digital Marketing Internပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်
Top5Cafés To Work Near Sule
Thein Htike AungDigital Marketing Managerရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လုပ်ဖို့၊ မီတင်တွေ့ဆုံဖို့ အတွက် နေရာကောင်းကောင်း လိုက်ရှာရတာလည်း အမောပါပဲ။ ဒါကြောင့် New Day Jobs ကနေ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ် လုပ်လို့ရမယ်၊ မီတင်တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပြီး ကော်ဖီကောင်းကောင်းရနိုင်မဲ့ ဆူးလေအနီးတဝိုက်ရှိ ကော်ဖီီီီီီဆိုင်နေရာလေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။Kafe in TownPhoto: Kafe In Townဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ လူငယ်ဆန်ဆန်၊ Modern Classic အသွင်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ လန်းဆန်းစေတဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အစားအသောက်၊ ကော်ကော်ဖီကောင်းကောင်းနှင့် သက်တောင့်သက်တာရှိတာကြောင့် မီတင်တွေနှင့် စီးပွားရေးတွေ့ဆုံမှုတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။...
Workplace Success Workplace Skill Productive
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ?ကျွန်တော်တို့ အများစုက ကိုယ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ချက်ချင်းမလုပ်ဖြစ်ပဲ email တွေစစ်လိုက်၊Social Media လေးသုံးလိုက်၊Video လေးတွေကြည့်လိုက် နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။သင်က အလုပ်ပြီးရမယ်မှန်းသိတယ် ဒါပေမယ့် အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လို ခံစားဖူးရင်တော့ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဲ့လို အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ကြပါတယ်။အချိန်ဆွဲမိတဲ့အတွက် ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို ဖဲ့ပေးပြီး အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ blog က သင့်အတွက်ပါ ။အချိန်ဆွဲခြင်းက သင့်ဘဝကို ဟန့်တားတဲ့အရာ မဖြစ်ပါစေနဲ့။လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်းတေွကတော့ -၁။ သင့်အလုပ်ကို အပိုင်းသေးသေးလေးတွေခွဲပါ။ကျွန်ပ်တို့ အလုပ်ကို လုပ်ဖို့ အချိန်ဆွဲမိတာကတော့ အလုပ်က ကျွန်တော်တို့ကို အရမ်း လွှမ်းမိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို တခုခြင်းဆီ ပြန်ဆွဲပါ။ပြီးတော့ အဲ့ တစ်ခုခြင်းဆီ အပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။အသေးလေးတေခွဲပြီးတာတောင်မှ သင် အချိန်ဆွဲ နေသေးတယ် ဆိုရင် ပိုပြီး အသေးဆုံးဖြစ်အောင် ခွဲလိုက်ပါ။အဲ့လို ခွဲလိုက်ရင် ဒီ အလုပ် လယွ်လယွ်လေးကို ငါဘာလို့ အချိန်ဆွဲမိနေတာလဲလို့ တွေးမိပါလိမ့်မယ်။၂။ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲပါ။သင့် Productivity က သင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။သင်အလုပ်စားပွဲ သင့် ရုံးခန်းကို ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့အရာတွေက သင်အလုပ်လုပ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်နေပါသလား ဒါမှမဟုတ် သင့်စိတ်ကို လေးလံပြီး အမြဲ အိပ်ချင်အောင် လုပ်နေပါသလား?အိပ်ချင်စရာ ကောင်းနေတယ် ပျင်းစရာကောင်းနေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းပါ။၃။တိကျတဲ့ deadline နဲ့ အသေးစိတ် timeline ရှိပါစေ။သင်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်အတွက် deadline တစ်ခုပဲ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အချိန်ဆွဲဖို့ အားပေးသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့လို deadline တစ်ခုတည်းရှိခြင်းက အချိန်အများကြီးရှိသေးတယ် ငါကောင်းကောင်းနားလို့ရတယ်လို့ ထင်မြင်စေပါတယ်။သင့်ရဲ့ လုပ်ရမယ့် ...
Building A Winning Mindset For Your Career
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ position ကနေ ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ Career life ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ???Huawei ရဲ့ Marketing Director ဖြစ်တဲ့ မခင်ရတနာဝင်းက ဗီဒီယိုလေးမှာ ပြောပြပေးထားပါတယ်။New Day Jobs ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေလိုက်ပါ
Are you generalist or specialist?
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveသင်ကကော Generalist လား?Specialist လား? သင် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးလိုက်ပါ။ပိုမို ကောင်းမွန် သော အခွင့်အလမ်းများကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေလိုက်ပါ
How to instantly improve your business english
Khant Zaw HeinDigital Marketing Internပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကို္င္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ - CLICK HERE TO BROWSE MORE JOBS
Thant Thandar Soe Digital Marketing Executiveရှုံးနှိမ့်မှုဆိုတာဘာလဲ?❓ကျွန်တော်တို့ လူပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှုံးကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ကျလေ့ရှိလဲ? ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၊ စာသင်ခန်းတစ်ခန်း၊ လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်၊ဝင်ငွေ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊အရည်အချင်း၊ စသည့် အရာတွေကိုတန်းစီလိုက်တဲ့ အခါ နောက်ဆုံးမှာ ရောက်နေတဲ့သူတွေကို အရှုံးသမား ဆိုပြီးသတ်မှတ်လေ့၊မှတ်ချက်ချလေ့ရှိကျပါတယ်။ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာရှုံးနှိပ့်ခြင်းကို ခံစားရလဲ?ဘယ်လို အချိန်တွေမှာအရှုံးသမားလို့ခံစားရလဲဆိုရင် အရိုးရှင်းဆုံးဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဝင်ပြိုင်ပြီး ရှုံးသွားတဲ့အခါ၊ ရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ကနေအပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အခါ၊ ကိယ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခု မဖြစ်မြောက် (သို့) အဆင်မပြေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှုံးသမားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ရှုံးနှိမ့်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ?အမေရိကန် မှာအကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်၊အထင်ရှားဆုံး သမ္မတအဖြစ်အများကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Abraham Lincoln( အီဗရာဟန် လင်ကွန်း ) က "ငါအစိုးရိမ်ဆုံးက မင်းဘယ်လောက် ရှုံးနိမ့်မှာကို မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ရှုံးနိမ့်မှုကိုနေသားကျသွားနမှာကို စိုးရိမ် တာ" ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တမ်း တစ်လေ ျှာက်လုံးမှာ ရှုံးနှိမ့်မှုတွေ အများကြီးကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှုံးနှိမ့်မှုတွေကို နေသားကျပြီး နောက်ထပ်မကြိုးစားတော့တဲ့ အခါ ကျမှုတကယ် ရှုံးနှိမ့်မှု အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ သင့်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှု ပဲကြုံရကြုံရ နောက်ထပ်ကြိုးစားဖို့ ကိုဘယ်တော့မှလက်မလေ ျှာ့လိုက်ပါနဲ့။ရှုံးနှိမ့်ခြင်းကနေဘယ်လိုသင်ယူမလဲ?သင်ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီဆိုရင်အောက်ပါနည်းအတိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။၁. ဘယ်နေရာမှာသင်မှား သွားတာလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားပါ။စဉ်းစားလို့ရပြီဆိုရင် မှားသွားတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပါ။(စာရွက် သို့ စိတ်နဲ့ မှတ်ပါ)၂. ပြီးရင် ဘာတွေကြောင့်မှားသွားသလိုဆိုတာပြန်စဉ်စားပါ။ (ကြောက်နေလို့လား၊ ဂရုမစိုက်ခဲ့လို့လား၊စသည်ဖြင့်)၃. ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားလူတစ်ယောက်နေရာကနေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ( အကယ်၍အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေထားတာဆိုရင် အင်တာဗျူးတဲ့ နေရာကနေ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်ကြည့်ပါ )၄. သင့်အမှားတွေကို သင်သေသေချာချာသိပြီဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။(သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကနေ လေ့လာနိုင်သလို၊အင်တာနက်မှ လဲရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ် )၅. သင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အခြားသူတွေကို ပြောပြပြီး အကြံဉာဏ်တွေတောင်းခံပါ။(အကြံပေးမဲ့ လူကလဲ အကြံအဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်)၆. နောက်ဆုံး အထက်ပါ အဆင့်တွေကနေ သင်ယူခဲ့တဲ့ အရာကို သင့်ရဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုမှာအသုံးချပါ။နောက်ထပ်ကျရှုံးခဲ့ရင်လဲ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ထပ်ခါထပ်ခါအောင်မြင်တဲ့ အထိကြိုးစားပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Thomas Edison တောင်မှ လျှပ်စစ်မီးသီး ကို အကြိမ်ပေါင်းတစ်သောင်း ကျော်လောက် စမ်းသပ်ပြီးမှ အောင်မြင်ခဲ့တာပါနော်။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Mobile Learning Apps | Easy To Learn in Everywhere
Thein Xtike AungDigital Marketing Managerမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှတဆင့် လွယ်ကူလေ့လာနိုင်သော Mobile App များ သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် အချိန်မအားအပ်နေသူတွေ၊ ကားတွေပိတ်နေလို့ ဘတ်ကားပေါ်မှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချသူတွေ၊ သင်တန်းတက်ဖို့အဆင်မပြေသူများအတွက် အောက်ပါမိုဘိုင်း Apps များကနေ သင့် Career Development အတွက် အရမ်းအကျိုးရှိမှာပါ။1. DuolingoDuolingo ဆိုတာ ဘာသာစကားလေ့လာရေး App ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို တစ်နေရာထဲမှာ လေ့လာလို့ရသလို သူငယ်ချင်းတွေ၊ တခြားသောလေ့လာသူတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပြီးလေ့လာလို့ရတော့ ဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင် မိတ်ဆွေတွေလဲတိုးပွားလာမှာပါ။ အခမဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့ App ဖြစ်ပြီး ကြော်ညာ Ads တွေနဲ့တော့ မျက်စိနှောက်တာကတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Ads Free ...
ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာရော လုပ်ငန်းခွင်မှာပါဆက်ဆံရခက်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေဆုံရလေ့ရှိပါတယ်။ လူမှု့ဘဝ မှာဆက်ဆံရခက်တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာက ကိစ္စသိပ်မရှိပေမယ့် နေ့စဉ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင် မှာအဲ့လိုဆက်ဆံရခက်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ အောက်ပါနည်းလမ်း၉ ခုက သင့်ကို အ ထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။၁။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ဖြေရှင်းပါ။အလုပ်မှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့သူ၊ သင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မ ပြေတဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဖြေရှင်းတာမျိုးမလုပ်ပဲ စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ဖြေရှင်းပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာတည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးကို အခြားသူတွေဆီက လေးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။၂။နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။လူတိုင်းမှာက သင့်ကိုဒုက္ခပေးချင်လို့ကို တမင်ခက်ခဲနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။သူက ဘာလို့ ဆက်ဆံရတာ ခက်ရတာလဲ?လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို ပြီးအောင်မလုပ်ရတာလဲ? သင့်နဲ့ အတူတူဘာလို့ တွဲမလုပ်ချင်ရတာလဲ?အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းးကို အရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ဘယ် အခြေအနေ ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကို သိမှာဖြစ်ပါတယ်။၃။ တခြားသူတွေဆီကနေ အကြံဉာဏ်တောင်းကြည့်ပါ။လူတိုင်း သင့်လို အခြေအနေမျိုးကိုကြုံဖူးကျမှာပါ၊ အဲတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေ ဆီကနေ သူတို့တုန်းက ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ၊ သင့် အခြေအနေကိုရောဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ အကြံဉာဏ် တောင်းကြည့်ပါ။၄။ တစ်ဖက်လူကိုသင်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ။တစ်ခါတစ်လေကျရင် သင့်အခြေအနေကိုတစ်ဖက်လူက နားမလည်ရင်လည်း ဆက်ဆံရေးအဆင်မ ပြေတာတွေ၊ အလုပ်အဆင်မ ပြေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ သင့်အနေ နဲ့ သင့်အခြေအနေကို တစ်ဖက်သားနားလည်အောင် ပြောပြပါ။ အရေးကြီးရင်ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ သင်ဘာကြောင့် ဒါကိုလုပ်လဲဆိုတာကို တစ်ဖက်လူနားလည်အောင် ပြောပြတာကို လုပ်ပါ။၅။ သူတို့ကို အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပေါင်းသင်းပါ။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာEmailတွေ၊Internal messaging app တွေနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်တာတွေကို လျှော့သင့်ရင်လျှော့ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာက လဲနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်စာအတူတူစားတာ၊တကယ်လို့သောက်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်အတူတူသောက်တာတို့ကအဖွဲ့တွင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။၆။လေးလေးစားစားနဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ဘယ်သူကမှတော့ချေချေငံငံ၊မလေးမစား ဆက်ဆံတာကို ကျေနပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်က လူတစ်ယောက်ကို မလေးမစားနဲ့ ဆက်ဆံလိုက်မိရင် သင့်ကိုလဲ မလေးမစားနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံတာကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကအရင်ဆုံလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံပါ။ တစ်နည်း အားဖြင့် ဘယ်သူကိုမဆို Respect ထားပြီးဆက်ဆံသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်။၇။ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။တစ်ခါတစ်လေ ဆက်ဆံရခက်တဲလူတွေကြောင့် အလုပ်မှာ ရှေ့မရောက်တော့ပဲ အခြေအနေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးရောက်ရင်လည်း အဲ့ဒီ အတွက်ကို ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်တာ တို့၊ခံပြင်းတာတို့ မကျေမနပ် ဖြစ်တာတို့ အဲ့လိုမျိုး ခံစားနေရတာက သင့်လက်ရှိ အခြေအနေကိုပြောင်းလဲမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပြန်ခံစားမနေပဲ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။၈။ လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။သင်က အပေါ်မှာပေးထားတဲ့နည်းတွေကို အကုန်အသုံးပြုပြီးတာတောင်မှ ဆက်ဆံရတာခက်နေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် နည်းလမ်းက လျစ်လျူရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလျစ်လျူရှုမလဲဆိုရင်တော့သူ့ကို အရမ်းလိုအပ်တော့မှ သူနဲ့ဆက်ဆံပြီး သင်လုပ်စရာရှိတဲ့ အရာတွေပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူက လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့နေရာကပါဝင်နေတာဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး နည်းလမ်းကိုသုံးသင့်ပါတယ်။၉။ အထက်လူကြီးကိုတင်ပြပြီး အ ြဖေရှာပါ။ဒီနောက်ဆုံး နည်းလမ်းကို အပေါ်မှာရှိတဲ့နည်းတွေနဲ့လဲအလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ တခြားရွေးစရာမရှိတော့ဘူး၊မလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မှ ထုတ်သုံးသင့်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကအထက်လူကြီးက ပြောမှပဲ အဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ သင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဖြေရှင်းပဲ ပြောလိုြက်ခင်းဖြင့် သင့်အထက်က လူကသင့်ရဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်းနည်းတယ်လို့ထင် သွားနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး မဖြစ်မနကျေမှသုံးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါ အချက် ၉ ချက်ကိုလက်တွေ့အသုံးချရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆက်ဆံရခက်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို New Day Jobs မှာ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Career Advice LandYourDreamJob Workplace Success Workplace Skill
Importance of Body Language in the Workplace
Khai Deih Neam Digital Marketing Executiveလုပ်ငန်းခွင်မှာ body language က ဘာကြောင့် အရေးပါတာလဲ?သုသေတနများအရ လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာမှု ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ body language လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာ အသုံးချမှုအပေါ်မှာ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း၊အသံအနိမ့်အမြင့် အသုံးချမှုက ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ စကားလုံးသုံးနှုန်းမှုက တော့ ၇ ရာခိုင်နှုန်း မူတည်နေပါတယ်။Body Language လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်နဲ့ ပြောဆိုရတဲ့ အရာကို ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာအနေအထားပုံစံ၊စကားပြောတဲ့ အခါမှာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထား၊ကိုယ်ပိုင်နေရာ လို့ခေါ်တဲ့ personal space ယူသည့်ပုံစံ၊လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ ပုံစံ နှင့် မျက်လုံးအကြည့်လို့ ခေါ်တဲ့ eye-contact တို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ တွေးခေါ်တဲ့ ပုံစံတွေက အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာ body ...
5 Professional traits which don't need special talents
Khant Zaw HeinDigital Marketing intern1. Punctuality-ရုံးချိန်မှန်တာ၊ deadline တွေ တိတိကျကျထိတာကတော့၊ ချိန်းထားရင် နောက်မကျတတ်တာ စတဲ့ အချိန်မှန်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေကို ရှိ‌ထားခြင်းဟာ ကိုယ့်ကို colleague တွေက လေးစားသလို၊ အလုပ်ပေါ် commitment ရှိတယ်ဆိုတာလဲ ပေါ်စေပါတယ်။2. Positive Energy-အလုပ်ရောက်တာနဲ့ ဆူပုတ်ပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ နေတတ်တဲ့သူနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတတ်သူဆို ဒုတိယလူကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ပိုပေါင်းသင်းလိုကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယေဘူယျအားဖြင့် positive energy ရှိတဲ့သူနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတာပိုအဆင်ပြေချောမွေ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။3. Sharing credit-ဘာလုပ်လုပ်ကိုယ်ပဲ နာမည်ကောင်းယူနေတာထက် ကိုယ့် teammate၊ ...
Job search tips for 2020
Khai Deih NeamDigital Markeitng Executive2020 မှာ အလုပ်ရှာရန် tips များ၁။ သင့် CV ကို အဆင့်မြင့်ပါ။နှစ်စဟာ သင့် CV ကို မြှင့်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့မို့ ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CV ကို ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။CV တစ်ခုတည်းကိုပဲ မပြင်ဆင်ပဲ သင့် Linkedin ကိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။Linkedin ကို ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို New Day Jobs ရဲ့ live ...